Ahoana ny famelana ny pizza anao ... er ... Vokatra mivarotra tena an-tserasera | Martech Zone
Ahoana ny famelana ny pizza anao… er… Varotra hivarotra an-tserasera
Alatsinainy 16 Febroary 2015 Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2020 Douglas Karr
Ny namako akaiky, James, dia manana an'i Brozinni Pizzeria. Tsy hikorontana aho - marina ny pizza fanao any New York tsara indrindra any Indy. Nanampy anay kely i James, nitondra ny zavatra nahagaga Kamio pizza Indianapolis ho an'ny famoriam-bola tamin'ny taon-dasa ary hikarakara hetsika ho avy amin'ity herinandro ity. Ho valin'izay, dia nanangana tranonkala ho azy izahay.
Rehefa nanamboatra ny tranokala izahay, dia fantatray fa zavatra iray ihany no zava-dehibe - ny famelana ny sakafo hiresaka. Pizza no sakafo tonga lafatra ho an'ny sary - miaraka amin'ny loko mahatalanjona izay afaka mandre fofona fotsiny amin'ny fijerena. Fa maninona no afeninao sary anaty sary madinidinika eraky ny tranonkala feno fitetezana, sidebars, ary toerana very maina hafa? Niara-niasa tamin'i James sy ny ekipany izahay, dia nanapa-kevitra ny hanavao sy hanova an lohahevitra fisakafoanana mahavariana tena lafo izany.
Azontsika atao ny manangana lohahevitra manokana - fa raha ny marina dia tsy mendrika ny hanaovana ezaka intsony izy io. Ireo mpamorona lohahevitra dia manao asa mahatalanjona amin'ny fananganana asa mora foana izay amidy an'arivony maro nefa azo namboarina toa ny nataontsika tamin'ny tranokalan'i Brozinni. Ny lohahevitra dia miaraka amin'ny fampitaovana rehetra:
Fisie Photoshop raha sanatria tianao hamboarina ny sary namboarina.
Fandaminana paralaks mahafinaritra ny mivezivezy sy manome sophistication avo lenta kokoa.
Volavola mamaly izay mijery tsara tarehy amin'ny finday na amin'ny takelaka toa azy ireo eo amin'ny birao.
Shortcuts izay mamela ny bokotra, fizarazarana marindrano, sary masina ary ny fizoro tsanganana.
Lohahevan'ny ankizy natsangana mba tsy hahafahanao mamaky sy manamboatra ny lohahevitra fototra - izay havaozina matetika miaraka amin'ny famoahana fiarovana na fiarovana.
Natao tao amin'ny Network Solutions ilay sehatra ka nanapa-kevitra ny hiaraka amin'ny fampiantranoana WordPress izahay… hadisoana lehibe. Nihintsana ara-bakiteny ny fantsom-pifandraisana vao avy nanavao ireo rakitra lohahevitra! Rehefa nangataka fanampiana tamin'ny ekipa mpanohana azy ireo aho dia naniry ny hanafika ahy tamin'ny fanohanana ara-teknika izy ireo ary hiantso ahy hiverina amin'ny ora fiasana. Ugh.
Nanaikitra ny bala aho ary nametraka ilay tranonkala tamin'ny drafitra fampiantranoana feno, noterena ny sary rehetra mampiasa Kraken, ary avy eo namboarina WP Rocket hanampy haingana ny tranokala. Ho hitantsika ny fahombiazany mandritra ny herinandro vitsivitsy alohan'ny hanapahantsika hevitra raha mila mamindra azy amin'ny mpampiantrano tsara kokoa isika.
Fehiny: Tsy dia sarotra na lafo ny fananganana tranokala tokana miaraka amina lohahevitra mahafinaritra sy fampiantranoana antonony. Hojerentsika izao ny fahombiazan'ny tranokala amin'ny baiko fikarohana, sosialy ary fitondra!
Tags: brozinnifamolavolanaMalagasy famolavolanatranonkala
Torohevitra 4 ilaina amin'ny fanatsarana ny fanananao
Jun 22, 2015 ao amin'ny 10: 22 PM
Douglas - Mahagaga ny tranokalan'ny trano fisakafoanana, na izany aza mifototra amin'ny lohatenin-dahatsoratra nanantena aho fa afaka mankany amin'ny menio ary hijery ny fahitan'ny lovia sakafo tsirairay amin'ny sary! Fa kosa ilay "menio tokana sehatra" tiako hiresahana aminao momba ny fanampiana an'i Crave.ly amin'ny fanovana an'io ary ny fanampiana ireo trano fisakafoanana hitantana ny menus an-tserasera amin'ny sary hanehoana ireo sakafo araka ny nolazainao, avelao ny sakafo hiteny !
Jun 22, 2015 ao amin'ny 10: 42 PM
Salama Bryan, tsara be izany! Tsy manampy azy ireo mavitrika izahay fa azonao atao ny manantona sy mijery raha tian'izy ireo izany. Nampihatra ny rafitra nangatahin'izy ireo fotsiny izahay.